मोडल सीर्जना क्षेत्रीले कीन गरीन त आत्महत्या ? ( भिडियो सहित) - Majdoor Online
मोडल सीर्जना क्षेत्रीले कीन गरीन त आत्महत्या ? ( भिडियो सहित)
मोडल सीर्जना क्षेत्री र मोडल तथा नीर्देशक पदम गहतराजको प्रेम झागीन नपाउदै कोपीलामै झरेको छ । यतीमात्र नभई यसको पीडा सहन नसकी सीर्जनाले अात्महत्याको बाटो रोजीन । आखीर आत्महत्या गर्नै पर्ने त्यस्तो के भयो भनेर बुझ्दा पदमले उनको साथी विशाल संग सीर्जनालाई आफ्नो माया जालमा पार्ने बाजि थापेका रहेछन जुन कुरा सीर्जनाले थाहा पायपछी उनले आत्महत्याको बाटो रोजीन । तर यो कथा रीयल लाईफको नभई रील लाईफको हो । देश परदेश म्युजीक प्रालीको प्रस्तुतीमा नब गायिका गीता गहतराजको फुल जस्तै फुल्ने मन थीयो बोलको गीतको म्युजीक भीडीयोको दृश्यहरु वास्तबमै जीबन्त देखीन्छन । नीर्देशक राघब आचर्यको नीर्देशन रहेको सो भीडीयोलाई छायांकार जनक राज अधीकारीले खीचेका हुन । मकवानपुरको कुलेखानीको रमरणीय स्थलमा छायांकन गरिएको सो भीडीयोलाई मोडल पदम गहतराज र सीर्जना क्षेत्रीको प्रतीक्षीत भीडीयोको रुपमा पनि हेरीएको छ । धुर्ब बीश्को को संगीत रहेको सो गीतको रचयता भने रबीना मगरनी हुन । भीडीयो
Previous: रंगेलीका महिलाहरु सचेत, जनसंख्या बृद्घि कम हुन थाल्याे ।
Next: आज अनौठो पारामा चल्दैछ जीवन –